«Raharaha nahafaty ny Dr Daniel» – Toamasina: nohadihadian’ny zandary, hiakatra fampanoavana ny profesora iray | NewsMada
Adin’ny sivy be izao, omaly, no nanadihadian’ny zandary misahana ny fikarohana momba ny heloka bevava, Analakininina, ny profesora iray, tompon’andraikitra ao amin’ny hopitaly CHU Morafeno Toamasina. Anton’izany ilay raharaha nahafaty ny dokotera Andriamiaravonjy Daniel. Hiakatra fampanoavana, anio, ny tenany.
Nandray an-tanana ny fanadihadiana ny zandary misahana ny ady heloka bevava sy ny fikarohana etsy amin’ny toby Analankinina. Niafara amin’ny hiakaran’ny raharaha eny anivon’ny fampanoavana , anio izany. Voalazan’ny loharanom-baovao fa anisan’ny antony namotorana azy ny fahitana ny laharan-telefaonin’ity profesora ity niantso farany ny Dr Andriamiaravonjy Daniel hita faty nifatotra tao amin’ny efitrano nitsaboana azy, ny alahady 24 mey lasa teo. Nalain’ny mpitandro filaminana tany an-tranony, Salazamay Atsimo, omaly vao maraina, ity talen’ny CHU Morafeno teo aloha ity nialoha izao famotorana izao. Anisan’ny mpitarika ny ekipan’ireo dokotera misahana ny fitsaboana ny valanaretina Covid-19 ao amin’ny hopitaly manara-penitra ao Toamasina ny tenany.
Hanao rodobe ireo mpitsabo
Nifarana tamin’ny 7 ora sy fahefany ny fanadihadiana raha efa nanomboka tamin’ny 10 ora maraina izany.
Etsy andaniny, vory lanona sy tonga marobe teny amin’ny manodidina ny tobin’ny zandary avokoa ireo mpitsabo rehetra eto Toamasina, nanotrona ity mpiara-miasa aminy ity. Nanapa-kevitra izy ireo fa hanao rodobe eny amin’ny fitsarana avokoa, anio maraina. Hanao ny akanjo fotsy maha mpitsabo sy mpiasan’ny fahasalamana avy izy ireo amin’izany.
Tsiahivina fa efa toromarika tamin’ny filankevitry ny minisitra manokana, ny alahady teo, ny hanokafana fanadihadiana ny amin’ny nahafaty io dokotera tao amin’ny CHU Morafeno io.